समाजप्रतिको दायित्व बढी छ | कोरोना कहर | कोरोनाको बेला..
कोरोना कहर | कोरोनाको बेला..
समाजप्रतिको दायित्व बढी छ
२ असार २०७७, मंगलवार ०८:१२
अशोक कुमार शाही
विश्वका धेरै ठाउँमा कोरोना फैलिरहेका बेला नेपाल पनि यसबाट बच्न सक्दैन जस्तो लागेको थियो । त्यसैले लकडाउन सुरु हुनुअघि नै तानसेन नगरपालिकामा हामीले कोरोनाबारे जनचेतना फैलाउन थाल्यौँ । विभिन्न छापा माध्यम, अनलाइन र एफएमबाट सन्देश प्रकाशन र प्रसारण गर्‍यौं । भयाभह नफैलियोस् भनेर हामीले यसो गरेका हौँ ।
सरकारले लकडाउन लागू गरेको केही दिनपछि हातमुख जोर्न समस्या भएका व्यक्ति, परिवार, सदुमायलाई लक्षित गरेर राहत विरतरण कार्यविधि बनायौँ । त्यही कार्यविधि अनुसार पहिले १७ सय परिवारलाई नि:शुल्क राहत सामाग्री वितरण गर्‍यौं । कतिपयले निःशुल्क हो भने राहत लिदैनौँ भन्नुभयो । त्यसपछि हामीले ३२ सय परिवारलाई सुपथ मूल्यमा राहत दियौँ ।
हामी राहतमा मात्रै केन्द्रित भएनौँ । कृषिउपज तयार थिए तर बजार पुर्‍याउन समस्या भयो । कृषकको उत्पादन उपभोक्तासम्म पुर्‍याउन तानसेन नगरपालिकाले कृषि एम्बुलेन्स चलायो । कृषिसँग सम्बन्धित संघसस्थालाई बोलाएर कृषि एम्बुलेन्स चलाउन प्रोत्साहन गर्‍यौं । उहाँहरू मान्नुभयो । यसो गर्दा बाटोमा मान्छेको आवतजावत कम हुने भयो । सबै घरघरमा बस्न थाल्नुभयो । अहिले कृषकबाट किनेको मूल्यमा भाडा मात्रै जोडेर बजारमा तरकारी बिक्री भएको छ ।
हामीले मल, घाँसका बीउ, मकै र तरकारीका बीउ पनि टोलटोलमा वितरण गरेका छौँ । उहाँहरूले उत्पादन गरेका तरकारी बजारमा बिक्री नभए हामीले किन्छौँ भनेका छौँ ।
हामीले हटलाइन नम्बर दिएका छौँ । राहत चाहिएकाले यसमा फोन गर्न सक्नुहु्न्छ । सुत्केरी र काम गर्ने नसक्नेलाई घरैमा नि:शुल्क राहत पुर्‍याउने गरेका छौँ । सक्षम मानिसलाई हामीले वडावडामा काम गर्ने अवसर दिएका छौँ । अहिले तानसेनका १४ मध्ये ७ वटा वडामा काम भइरहेको छ । युवाहरूले काम गरिराख्नुभएको छ । कतिपय ठाउँमा जेष्ठ नागरिकले पनि हामी नि:शुल्क राहत लिदैनौँ भनेर काम गरिराख्नुभएको छ ।
हामीले दुई ठाउँमा क्वारन्टिनको व्यवस्था गरेका छौँ । वडा नम्बर ६ स्थित जनप्रिय माध्यमिक विद्यालयमा ६० बेड र वडा नम्बर ५ मा रहेको त्रिभुवन बहुमुखी क्याम्पस विज्ञान ब्लकमा ९० बेडको क्वारन्टिन चलाएका छौँ । १८ वटा आइसोलेसन बेड बनाएका छौँ । अहिले कोरोना पोजिटिभ पाइएकालाई हामीले त्यहाँ राखेका छौँ ।
क्वारन्टिन बसेका मानिसबाट आफूलाई पनि कोरोना सर्ने हो कि भनेर मान्छे डारउन थाले । एक किसिमको त्रास फैलियो । एकातिर मानिसहरू भारतबाट लामो यात्रा गरेर आफ्नै ठाउँ फर्किएका छन् । यहाँ भने मान्छेको बोलीचाली, व्यवहार अनि उनीहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक भयो । त्यसपछि हामीले मिलेर सबैलाई सम्झाउन थाल्यौँ । हामीले उहाँहरूलाई बतायौँ — उहाँहरू पनि मानिस नै हो । कसैलाई रोग लाग्दा यस्तो व्यवहार गर्नु राम्रो होइन । तपाईंमध्ये कसैलाई यो रोग भयो भने के गर्नुहुन्छ ?
त्यसपछि क्वारेन्टाइनमा बस्नेप्रति नगरवासीको दृष्टिकोण फेरियो ।
अहिले पनि बाहिरबाट आएका मान्छेहरूलाई घरसम्म पुर्‍याउन गाडीहरूले मान्दैनन् । कतिपय चालकका घरपरिवारले मान्दैनन् । छरछिमेकले पनि मान्छे बोकेपछि घर नआउनु भने । त्यसपछि हामीले अहिले नगरपालिकाकै गाडीमार्फत मान्छेहरूलाई उनीहरूको ठाउँ पुर्‍याइरहेका छौँ ।
लकडाउन सुरु हुनुअघि नै हामीले तानसेन नगरपालिकाकाले बसर्पाकमा र प्रवेशद्वारमा हेल्थडेस्क स्थापना गरेका थियौँ । मानिसहरू लुकीछिपी आउन थालेपछि हामीले विभिन्न जनशक्ति प्रयोग गरेर प्रत्येक वडामा गएर कोभिड सम्बन्धी काउन्सिलिङ गर्न थाल्यौँ । हामीले सामान्य ज्वरो आउँदा पनि चेकअप गर्ने सुविधा उपलब्ध गराएका थियौँ । तर मानिसहरू डराएर स्वास्थ्य चौकीमा आउन छाडेपछि हामी नै वडावडामा गएर चेकजाँच गर्नुका साथै रोग सम्बन्धी सूचना दिन थाल्यौँ ।
क्वारन्टिनमा हामीले म्याटको व्यवस्था गरेका थियौँ । उहाँहरूको घरपरिवारको रेखदेखमा हामीले क्वारन्टिन व्यवस्थापन गर्‍यौं ।
हामीले स्वास्थ्यकर्मीका लागि पनि छुट्टै घरको व्यवस्था गरेका छौँ । पोजेटिभ नभए पनि हामीले उहाँका लागि छुट्टै घरको व्यवस्था गरेका हौँ । यसले गर्दा घर आउने-जाने समय पनि बच्ने साथै घरपरिवारलाई कतै संक्रमण होला कि भनेर डराउनु नपर्ने । उहाँहरूलाई चाहिने सबै स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराएका छौँ ।
पहिले दुई दिन पीपीई नहुँदा उहाँहरूले कालो पोलथिन लगाएर क्वरन्टिनमा बसेका मान्छेको जाँच गर्नुभयो । त्यसो गर्न स्वास्थ्यकर्मी साथीहरू पछि हट्नुभएन । त्यो देख्दा मलाई गर्व लाग्यो । अनि आफूलाई पनि काम गर्ने हौसला जाग्यो ।
म बाहिर हिँडेकोमा मेरो घरपरिवारले गुनासो गर्ने गर्छ । हिंड्नै पाइँदैन त भन्दैनन् तर यस्तो बेला घरमै बसे पनि हुने त भन्ने लागेको छ उनीहरूलाई । तर म जनप्रतिनिधि भएकाले घरभन्दा बढी दायित्व समाजप्रति छ । हामी अघि बढेनौँ भने नागरिकलाई कसले सहयोग गर्ने ? कसले व्यवस्थापन गर्ने ? हरेक ठाउँ बस्तीबाट सबैले सक्दो सहयोग गर्नुपर्छ यो विपत्को बेलामा ।
अहिले पनि तानसेन नगरपालिकामा सहयोगीहरू आइरहेका छन् । व्यक्तिगत रूपमा पनि सहयोग आइरहेको छ । क्वारन्टिनमा बसेका मान्छेलाई पैसा अथवा खानेकुरा के कसरी सहयोग सकिन्छ भनेर सोध्नुहुन्छ ।
विदेशमा काम गरिरहेका कति नागरिक स्वदेश फर्कन चाहन्छन् भनेर हामीले अनलाइन सर्भे गर्‍यौं । हामीले जिल्लामा फर्कन चाहने मान्छे कति हुनुहुन्छ ? यहाँ आइसकेपछि फेरि फर्कने को हुनुहुन्छ ? यहीँ बस्ने भए के काम गर्न चाहनुहुन्छ भनेर सर्भे गर्‍यौं । धेरैजसोले आफनै देश फर्किएर केही गर्छु भन्नुभएको छ । हामीले यस काममा आगामी बजेटमा प्राथमिकता दिनेभएका छौँ ।
हामीले सुरुमा रेडियोमार्फत विभिन्न विद्यार्थीका क्लास सञ्चालन गर्‍यौं । शिक्षासँग जोड्नको निम्ति, हामीले शिक्षकलाई पनि अनलाइन अध्यापन सम्बन्धी प्रशिक्षण दियौँ । अझै व्यवस्थित गर्न अभिभावक शिक्षक भन्ने अवधारणा ल्याएका छौँ । परिवारले नै आफ्नो तर्फबाट बालबालिकालाई शिक्षा प्रदान गरुन भनेर । स्कूल छाड्ने विद्यार्थी नबढुन् भनेर हामीले शिक्षहरूलाई पनि फोनमार्फत हुन्छ या नजिकै घर भए विद्यार्थीबारे जानकारी लिनुहोस् भनेका छौँ । यसले गर्दा विद्यार्थीले अनावशयक कुरामा ध्यान दिनुका सट्टा पाठ्यक्रममा ध्यान दिन्छन् ।
अहिले प्रविधिको विकासले गर्दा अझै भनौँ सामाजिक सञ्जालले गर्दा मानिसले छिनमै सूचना पाउँछौँ । तर त्यही सोसल मिडियामा कहिले प्रमाण बिनाका हल्ला शेयर गर्ने प्रवृतिले धेरै समस्या निम्ताएको छ । कोही व्यक्ति मर्‍यो भने पनि कोभिड-19 ले हो भनेर फेसबुकका वाल भर्न हतार हुन्छ मान्छेलाई । यसले गर्दा मानिसमा एक प्रकारको मानसिक तनाव उत्पन्न हुन्छ जुन कोरोनाभन्दा पनि खतरा हुन्छ । त्यसैले यो सोसल मिडिया प्रयोग गर्नेले पनि सकारात्मक सन्देश दिने हो भने यस्तो विपत्मा धेरै राहत हुन्थ्यो । समाचार लुकाउनु भन्न खोजेको होइन, सही जानकारी मात्र राखौँ भन्ने हो ।
विपत्‌सँग जुध्न तयारी नगर्ने चलननले गर्दा अहिले समस्या भएको छ । तर पनि आफ्नो ठाउँबाट हामी सबैले सहयोग गर्ने हो भने हामी यो रोगबाट बच्न सक्छौँ । मेरो कार्यकाल हुँदासम्म र त्यसपछि पनि म यही समाजको सेवामा खटिरहनेछु ।
यो कथा तानसेन नगरपालिकाको , नगरप्रमुख अशोक कुमार शाहीसंग गरीएको कुराकानीमा रहेर अनुषा स्वाँरले लेख्नु भएको हो ।
बन्द कोठाको अत्यासलाग्दो बसाइ
१९ जेष्ठ २०७७, सोमबार ०५:२४
कोरोनाले रोकेको कारोबार
४ असार २०७७, बिहीबार १०:०५
लकडाउनमा एक्लै हुँदा !
२६ जेष्ठ २०७७, सोमबार ०८:००
Total Visits: 19,140
यो कोरोनाको बेलाका मानिसहरुको कुराहरु एक ठाउमा राख्नको लागि तन्नेरी चासो सुरु गरेको प्लेटफर्म हो । हामीलाई लाग्छ यी कथाहरुबाट उर्जा, साहस, आत्मीयता, सहानुभूति, सहयोग, क्रोध र एकताको भावना हाम्रो मनमा जगाउने छन् ।
“तन्नेरी चासो” युवाहरुले समाज वा देशका बारेमा आफूलाई लागेका वा देखेका कुराहरु विश्लेषण गर्दै आफ्नो विचार अभिव्यक्त गर्ने साझा मञ्च हो । यसको प्रमुख उद्देश्य राजनीतिक तथा सार्वजनिक निकायहरूको निगरानी, सामाजिक तथा राजनीतिक विषयहरुमा तार्किक बहस र युवासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने नीतिगत सवालहरूमा विश्लेषण तथा छलफल गर्ने रहिआएको छ ।